Somaliland oo kasoo horjeesatay Isbaheysiga ay Somalia ku biirtay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare	 Last updated Jan 7, 2020
Somaliland ayaa si weyn uga soo horjeesatay shir wasiirrada arrimaha Dibadda waddamada Kulaala Badda cas iyo Gacanka Carabtu ku yeesheen waddanka Sacuudiga.
Qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha Dibadda Somaliland ayaa lagu sheegay in Somaliland ay ku taagan tahay mawqifkeedii hore ee ahaa in aanay wax wadashaqayn ah la yeelaan waddamada iskaashanaya Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ilaa inta la dafirayo xuquuqdeeda muhiimka ah.
“Somaliland waa dal madax bannaan dal kale uma daba fadhiisanayso Xuduudaheeda Badeed” ayaa lagu qoraalka.
Somaliland ayaa sheegtay in Xuduudeeda badeed oo dhererkeedu dhan yahay 850 KM ay ka ilaalisay in ay gabaad u noqoto Burcad Badeeda iyo weliba Ururrada Argagaxisada.
Shirka Sacuudiga ka dhacay waxa ka qayb-galay wasiirka arrimaha Dibadda Soomaaliya.